Fabio Capello oo si weyn u taageeray tababare Lopetegui, isagoo dhinaca kale eedeeyay maamulka kooxda Real Madrid – Gool FM
Fabio Capello oo si weyn u taageeray tababare Lopetegui, isagoo dhinaca kale eedeeyay maamulka kooxda Real Madrid
Dajiye October 25, 2018
(Real Madrid) 25 Okt 2018. Macalinkii hore kooxda reer Spain ee Real Madrid Fabio Capello ayaa si weyn u taageeray tababare Julen Lopetegui, kadib hoos u dhaca ku yimid Los Blancos xili ciyaareedkan.
Fabio Capello ayaa wareysi uu dhawaan bixiyay wuxuu kaga hadlay xaalada macalinka reer Spain Julen Lopetegui wuxuuna yiri:
“Xaalada uu haatan kaga sugan yahay Julen Lopetegui kooxda Real Madrid, waa isla xaaladii aan kaga sugnaa Los Blancos, laakiin waxaan rajeynayaa inuu yeesho isla nasiibkeyga oo kale”.
“Real Madrid waxay fursad ahaan ii siiyeen afar maalmood si aan u saxo xaalada kooxda, waxaan barbaro 3-3 ah la galay kooxda Barcelona kulankii El Clasico, tan iyo kulankaas kooxda ayaa kasoo fiicnaatay sida hore, ugu dambeyna waxaan ku guuleesanay horyaalka La Liga”.
“Muhiim ma ahan in Lopetegui lagu eedeeyo qaab ciyaareedka iyo goolal la’aanta heysata kooxda Real Madrid, sababtoo ah Cristiano Ronaldo ayaa ku soo bilaaban jiray ciyaarta, wuxuuna dhalin jiray goolka hogaanka, kadib bixitaankiisa maamulka kooxda ma aysan awoodin inay sameeyaan saxiixa badalkiisa isaga la mid ah”.
Si kastaba kooxda Real Madrid ayaa marti ugu noqon doonta Axada soo aadan kooxda Barcelona garoonkeeda Cump Nou si ay u wada ciyaaraan kulanka lugta hore El Clasico horyaalka La Liga ee xili ciyaareedkan.
Luis Suarez oo ka warbixiyay marxaladii ugu xumeyd uu soo maray xirfadiisa kubada cagta
Lionel Messi oo fariin la wadaagay saaxiibadiis kooxda Barcelona, kadib guushii ay ka gaareen Inter